Golden Land Myanmar: မိမိအကြောင်း မှန်တာပြောကာ ဝေဖန်သူတွေ့သမျှလူ အကုန် ဘန်း နေသည့် Eleven Media အား လူအများ စိတ်ပျက်နေ
မိမိအကြောင်း မှန်တာပြောကာ ဝေဖန်သူတွေ့သမျှလူ အကုန် ဘန်း နေသည့် Eleven Media အား လူအများ စိတ်ပျက်နေ
မိမိအကြောင်း မှန်တာပြောကာ ဝေဖန်သူတွေ့သမျှလူ အကုန် ဘန်း နေသည့် Eleven Media အား လူအ များ စိတ်ပျက်လျှက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
"ဟိုလေ..သမီးတို့..မသိလို့ မေးချင်လို့ ပါ။ ဒီဆိုင်ဘာ တိုက်တာတွေဘာတွေတော့နားမလည်လှပါဘူး။ 11 က တိုင်းပြည်မကောင်းကြောင်းတွေ ရေးရေးနေတာတော့ သတိထားဖတ်ရှုမိပါတယ်။ တရားရေးမန်ဒိုင် ယိမ်းယိုင်တို့ဘာတို့။ 11 facebook ကော်မန့်တွေမှာလဲ ပြည်ထဲရေးတို့၊ တရားေ၇းတို့ကို အ ပုတ် ချေ န တာလဲဖတ်ရပါတယ်။ အခုမှ ဘာလို့ သူတို့ ဆိုက်လဲ အဆော်ခံရ ရော ပြည်ထဲရေးကို တိုင်မယ်။ တရား စွဲမယ်တို့၊ အစိုးရအရာတွေ ကိုယ့်အောက်က၀န်ထမ်းတွေထိန်းသိမ်းထား၊ 11 က ကမ္ဘာ့နဲ့ ချီအ ရှက် ခွဲ ပြ မယ် တို့ဘာတို့ ဒီနေ့ facebook မှာရေးထားကြောင်းဦးဆိတ်ဖွားမှာဖတ်လိုက်ရလို့၊ သူ တို့ ဆဲနေတဲ့ အ ပုတ်ချနေတဲ့ ပြည်ထဲရေး၊ တရားရေးကို အခုမှ ကိုယ်ခံရေ တာ့ မှ ပြန်အားကိုးမယ်၊ ပြန်တိုင်မယ်ဆိုတော့ နည်းနည်း မိန်းမရှာဆန်တဲ့သဘော မျိုးမသက်ရောက်နေ ဘူး လား ဟင်..သမီးတို့မရှင်းလို့ပါ"
"ခွေးမသား Eleven ငါ့ကို ဘမ်းထားတယ်ကြည့်စမ်း ။ ရှယ်တယ်ကွာဘာဖြစ်တုန်းဆိုတဲ့ ကွန်း မန့်ေ လး တစ်ကြောင်းပဲပေးမိပါတယ်ကွာ ။ တော်တော်အောက်တန်းကျတာပဲ။သူတို့က အစိုး ရ ကို ဝေဖန်လို့ အ စိုးရက ဘမ်းရင်တော့ ဟိုပြောဒီပြော ပြော ဦးမယ် ။ တော်တော်တရားဖို့ကောင်းတယ်ကွာ ခု မှ သိ တယ် ငါ့ မလည်း ဒီလောက်နဲ့တော့ မဘမ်းလောက် ဘူးထင် တာေ ပါ့။ ငါ -ိုးမ Eleven -ီးပဲကွာ Unlike လုပ် တယ် ကွာ အဟက်ခံရတာနည်းတောင်နည်းသေးတယ်"
"Aung Zaw says: "I don't like and I don't believe on Eleven Media Group. It is one of the popular bias media. As you know, Myanmar government is now negotiating with KIA for cease fire. But KIA don't accept it. If KIA don't accept cease fire, Myanmar Government Army must have to crush KIA to prevent from destructive of Public Possession. It is legal right and the right way. Now, Myanmar Government is democratic government and KIA has right to ask their requirements from Legal way. And we know that KIA is not the representative of Kachin People. Now many Kachin Youth resettle to Yangon because they don't like KIA standing point. "
Min Thein Kyaw says: "Eleven Media သည်မီဒီယာကျင့်ဝတ်နှင့်မညီသည့်အပြင်၊ တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအပေါ်သစ္စာဖောက်လုပ်ပြီး...စစ်သွေးကြွ အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူ သူပုန်အားပေးလုပ်နေပါသည်
ထိုမျှမကသေး...Eleven Media သည် KIA ၏အထောက်အ ပံ့ကိုလည်း ယူထားပြီး ...သခင် အားရ ကျွန် ပါးဝ ဆိုသလို.... နိုင်ငံအပေါ်အကြည်အညိုပျက်ပြားစေရန်နှင့်နုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာ အာဏာကိုပါ ထိ ပါး ရန်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိနေ။"
"မီဒီယာတွေဆိုတာ ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ကိုယ့်လူမျိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ရမှာ။ အခုတော့ ကိုယ့်နိုင် ငံနဲ့ကိုယ့် လူ မျိုး ကိုေ စာင့်ရှောက်နေတဲ့ တပ်မတော် ကိုစော်ကားနေကြတယ်။ကြပ်ကြပ်စော်ကားကြ အဲဒီ တပ်မတော် မ ရှိ ရင် ဒင်းတို့အမေ ဒင်းတို့နှမတွေကို ဒင်းတို့အထင်ကြီး နေကြတဲ့အကောင် တွေ က တက်ဆော် သွား လိမ့် မ ယ်ဗျို့ .....။"
Labels: အသုံးမကျ စတုတ္တ